Fantatrao ve fa mahatsiravina ny fandroana
Home / Blog / Fantatrao ve fa mampihorohoro ny fandroana "maimbo"? Mitadiava loharano mety hanamboarana azy!
Fantatrao ve fa mampihorohoro ny fandroana "maimbo"? Mitadiava loharano mety hanamboarana azy!
2020 / 10 / 22 FisokajianaBlog 2083 0
Fantatrao ve ny mahatsiravina ny fofon'ny fandroana? Araka ny fanadihadiana, ny fofona maimbo sy fofona dia mety hiteraka asma, bronchitis, rashes, ary aretim-po sy aretim-po hafa ary aretina lehibe hafa.
Ny ratsy indrindra dia ny fandanian'ny olona farafahakeliny dimy taona amin'ny fiainany ao amin'ny trano fidiovana, mampiasa fidiovana mihoatra ny 15 minitra isan'andro, efa ho adiny roa isan-kerinandro, izay mitovy amin'ny dimy taona amin'ny fiainany voahodidin'ny "gazy misy poizina", hoy ny eritreritra. momba ireo mahatsiravina rehetra!
Misy hevi-diso lehibe efatra momba ny fanadiovana ny fandroana amin'ny trano fidiovana
Ny deodorization fandroana nentim-paharazana dia misy tsy fahazoan-kevitra lehibe efatra, andao jerena.
Hevi-diso # 1.
Tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny olombelona
Ny fofona navoakan'ny olombelona dia matetika misy amoniaka, hidrôdôdiôma, asidra urika ary gazy manimba hafa, indrindra ny hidrôzenina hidrôdida, ny fisefoana maharitra dia hiteraka fihenan'ny tsimatimanota maha-olona, ​​mandrisika ny fofon'ny olombelona sy ireo taova hita, mora hahatonga ny taova tsy handray andraikitra, tsy misy dikany, indrindra ho an'ireo be taona, vehivavy bevohoka, ankizy manimba kokoa.
Misokatra ara-dalàna ny fanararaotana fanararaotana
Adiresy ny loto sy ny bakteria
Ny mpankafy setroka dia mety hanana anjara toerana amin'ny fanoloana rivotra any amin'ny trano fidiovana, fa satria eo an-tampony ny mpankafy azy dia tsy azo esorina toy izao ny ankamaroan'ny akora mampidi-doza sy ny potika misy poizina: ny bakteria dia miraikitra amin'ny rindrina, lamba famaohana ary volo amin'ny ankapobeny. borosy sy zavatra hafa, dia tsy mora ny manilika amin'ny alàlan'ny fanararaotana.
Izy io dia manafoana ny fofona fandroana.
Ny aromatika sy ny freshener dia natao hanaronana ny fofona hafahafa amin'ny alàlan'ny famoahana fofona, ary tsy afaka hihetsika amin'ny etona izay miteraka fofona hafahafa, toy ny amoniaka sy hidrôdiôma sulfida, ary tsy afaka mamotika na manaisotra ireo entona manimba toy izany.
Ho fanampin'izany, ny ankamaroan'ny aromatika dia misy peratra benzena, aldehydes ary akora hafa, ny fampiasana maharitra dia mety miteraka fanapoizinana maharitra, ary mitarika homamiadana mihitsy aza.
Hetsika maimbo maimbo.
Vitsy kokoa ny flushes hataony.
Ny fahalotoana dia maimbo anay ny fofon'ny fofon-java-bary rehefa namofona ny lavaka fidiovana manontolo ny fofona ary nozaraina tany amin'ny trano fidiovana, raha izao no hamoaka azy, amin'ny fotoana hamokaran'ny cyclone ny lavaka fidiovana misy entona maimbo sy fofona mikraoba isan-karazany. ny trano fidiovana ary mankany amin'ny lalan-pisefoana ataon'ny olombelona, ​​manelingelina ny hozatra, dia mety hitarika aretina mora foana.
Avy aiza ny fofon'ny fandroana ary ahoana no hamahana azy?
Ny fifandraisana dia ny fantson-drano, izay manakana ny fofona sy ny bibikely manidina ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia misy fantson'ny karazana U sy karazana T amin'ny tsena. ny tatatra amin'ny gorodona u dia nozaraina ho tatin'ny rano ambany sy tombo-kase ao anaty etona araka ny halavan'ny feon-drano fitehirizana. Rehefa etona sy maina ny rano ao anaty tohotra fitehirizana dia hiakatra ny fofon'ny tatatra.
Rehefa raraka ny rano dia hanery ny tombo-kase hisintona ny hery misintona, ary hiverina amin'ny toerana niandohany ilay rano aorian'ny fitifirana, miampy ny famolavolana andriamby no hitazona azy mafy Mikasika ny fahateren'ny rivotra: mahery kokoa ny t-tatatra noho ny U-drain, raha misy fofona ratsy ny lalan-tany, ny zavatra voalohany tokony hodinihina dia ny tatatra U-dra no nanondraka ny rano, ary rano kely fotsiny no mila aidinao ao. hahatonga azy ho airtight.
(1) Ny iray dia tokony hiova, raha toa ka 50mm ny tombo-kase an'ny rano ao amin'ny gorodona, na ny famehezana ny tatatra amin'ny gorodona dia tsy tery, na simba, soloina fantsom-boaloboka vita amin'ny marika tsy misy fangarony.
(2) Faharoa, fehezo, raha misy elanelana misy eo amin'ny tombo-kasen'ilay rano sy ilay vilia, dia milalao lakaoly fitaratra hametahana azy.
(3) Famonoana otrikaretina, arotsaho ao anaty tatatra ny famonoana otrikaina simika mba hamongorana ny sisa tavela toy ny volo fandroana ao anaty fandroana.
(4) Atsofohy, matetika miaraka amina rano kely iray siny, manosotra ny tatatra amin'ny gorodona, ny sisa tavela ao anaty tatatra dia halefa, ary hiantoka ny rano hamehezana ny rano.
(5) Zahao ny satroky ny fantson-drano any ambony tafo raha voahitsakin'ny potipoti-javatra izy, ary raha izany dia diovy.
2, Loharanon'ny fofona:
Sasao ny fako
(1) Ny fantson-drano fantsakana fohy dia atsofoka mivantana ao anaty lakan-drano ary tsy nasiana tombo-kase ny interface, ary miverina manandrana ilay fantson-drano.
(2) Tsy misy fitehirizana rano ao anaty koveta fanariam-pako ambany fantsona, ka miteraka fody fofona.
(3) Ny volo fanasana sy ny sisa tavela dia misy eo amin'ny rindrin'ny fantsona eo akaikin'ny feon-drano fitehirizana rano, miharatsy rehefa ela ny ela, ny fofon'ny fofona, ka miteraka fody.
(1) Atsofohy ao anaty fantsom-pantsaka fantsom-bokatra ny fantsom-pandroana mba hanisy tombo-kase fingotra ary hanakanana ny fantsona fofona miverina.
(2) toy ny koveta fanasana ao ambanin'ny fantsakana dia tsy mitahiry fantson-drano, azo soloina hosotra sy coil, ny fananganana fantson-drano, manakana ny fantsona fofona miverina.
(3) mba hanadiovana matetika ny tarehy amin'ny volo sy ny sisa tavela rehefa manasa, dia aza avela hijanona eo akaikin'ny fitehirizana rano amin'ny rindrin'ny fantsona izany.
3, Loharanon'ny fofona: Seal Toilet (Flange) Toilet ary ny fifandraisan'ny fantsom-pako, misy tombo-kase iray, fantatra ihany koa ho toy ny flange. Fofona fandroana maro, tsy napetraka noho ny tombo-kase naterak'izany.
(1) Esory indray ny fidiovana ary apetaho indray ny tombo-kase.
(2) Raha poakaty ny gorodon'ny gorodona dia amboary aloha ny taila tsy misy lavaka, ary avy eo amboary ny fifandraisana misy eo amin'ny kabine sy ny gorodona.
(3) Aorian'ilay fidiovana dia rakofy avy hatrany ny fonony.
(4) matetika mampiasa rano handosirana ny trano fidiovana, mba tsy hitehirizana anaty rano maty, rano simba ny fantson-drano.
(5) Mampiasà matetika ny mpitsabo mpanadio simika (tsy asidra) hanadiovana ny kabine.
Maimbo ny volo sy ny sisa tavela Mandro ny volo mandro sy ny sisa tavela, mikoriana ao anaty fantsom-pivoaran-drano, sisa tavela eo amin'ny rindrin'ny tatatra, mihasimba ary maimbo, vokatr'izany dia miverina ny fofona.
(1) Fanadiovana tsy tapaka ny sisa tavela amin'ny efitrano fandroana.
(2) Mamono otrikaretina matetika hamonoana mikraoba manimba.
Previous :: Fanavaozana ny fitaratra amin'ny fandroana, ny 99% ny olona dia tsy hijery ity antsipirihany ity Next: Mankasitraka mihoatra ny 10,000 ny famolavolana ny efitrano fandroana, fanangonana natolotra!